Fanentanana avy amin’ny Fivondronamben’ny Eveka momba ny famangian’i Papa Fransoa an’i Madagasikara – Tambajotram-Pivavahan'ny Papa Maneran-tany – MADAGASIKARA
« Hataoko ao anatinareo ny Fanahiko…. Honina eo amin’ny tany nomeko ny razanareo ianareo, dia ho vahoakako ianareo, ary izaho ho Andriamanitrareo” (Ez 36, 27-28)
Misaotra an’Andriamanitra isika fa tanteraka ny faniriantsika sy ny an’ny Papa Fransoa, hamangy an’i Madagasikara ny 6 -10 septambra 2019, ho avy izao. Fitia mifamaly mahatsara fihavanana.
Famangiana pastoraly miavaka izany amin’ny maha filohan’ny Eglizy maneran-tany azy : hamafy fanantenana sy fiadanana ho antsika eto Madagasikara.
Manantanteraka ny fanamby apetrany ho an’izao tontolo izao izy : mandeha manatona ny vahoaka (sortie). Mankahery ny mahantra sy mizara ny hafalian’ny Evanjely.
Koa manentana antsika rehetra àry hivavaka sy hahay handray ireo toromarika rehetra, indrindra fa ireo izay omen’ny vaomieran’ny fandalinam-pinoana sy ny katesizy, ho fanomanana ara-panahy ity fahatongavan’ny Papa Fransoa ity.
Lasa toa fahazarana ny manao fampanantenana poak’aty sy ny fanaovana politika mampisara-bazana ny mpiray tanindrazana indraindray, ary ny fomba fiasa koa matetika toa tsy ahatsapana ny tena fitiavan-tanindrazana marina… fahazaran-dratsy manangona ny ho an’ny tena no hita fa tsy mitsinjo ny soa iombonana
Ho tonga hamafy fanantenana ny Papa Ray Masina :
Handray sokajin’olona maro samihafa Izy : Filoham-pirenena sy mpitondra fanjakana, fiaraha-monim-pirenena sy ny masoivoho vahiny, Eveka, Pretra, Relijiozy, Seminarista, Skolastika sy Novisy… Filoham-piangonana ao amin’ny FFKM sy mpitondra fivavahana ary ireo tsara sitra-po rehetra
Hankahery ireo tanoran’i Madagasikara izy sy ireo fianakaviana eny amin’ny Akamasoa (Père Pedro).
Fa indrindra, hankalaza Sorona Masina lehibe hiombonan’ny Malagasy rehetra eny Soamandrakizay – Androhibe.
Ho tonga hamafy fiadanana ny Papa Ray Masina :
Amin’ny maha PAPA FRANSOA AZY : Mpiandry ondry mahatoky izy, mamangy firenena maneran-tany; tsy mitsaha-manoratra sy mampianatra mba hampitombo finoana ny olona sy hampirindra ny fiainan’ny Eglizy. Araka ny voalazan’i Jesoa hoe : « Ho aminareo anie ny FIADANANA » (Jn 20,19).
Ho antsika eto Madagasikara : Hamafy fiadanana izy amin’ny alalan’ny vavaka sy ny fampianarany, izay inoana fa hampiombona antsika Malagasy rehetra, na katolika na tsy katolika, na mpino na tsy mpino, na ambanivohitra na an-tanandehibe…
Hanamafy orina ny fihavanana izy ka hampirisika antsika hifandray tànana mba ho afaka handrava ny elanelana misy amin’ny farim-piainana andavanandro.
Ary haneho amintsika rehetra koa fa ny EGLIZY dia « Fahazavan’ izao Tontolo izao » ao amin’i KRISTY izay MAMONDRONA NY SOATOAVINA REHETRA. (jer. Ef 1, 10)